Ike Gị Online Marketing na CDNify | Martech Zone
Anyị niile agaala ebe ahụ. Na-adọgbu onwe gị n'ọrụ na mgbasa ozi ahịa nke onye ahịa gị, na-eme ọtụtụ awa na ọtụtụ ọrụ dị ka ndị kachasị mma. Gbalị ike gị niile ijide n’aka na ihe niile dị, ka ihe wee na-aga were were were dịka ị nwere ike ibi ndụ. Agam ebe ahu ma amataghi m awa ole m jiri juo oso dika onye ara. Ma obi ụtọ bụ nnukwu akụkụ nke ihe mere ị na - eme n'ihi na mgbe ahụ ị malitere ma ị ga - ahụ ọrụ siri ike niile na - amalite ịkwụ ụgwọ.
Ndị mmadụ na-etinye ọdịnaya gị yana ịkekọrịta ya. Mara banyere ika onye ahịa gị na-aba ụba na ihe niile ị ga - eme bụ ịnọdụ ala ma lelee ọrụ mgbasa ozi na - atụgharị na mgbanwe weebụsaịtị. Oge imeghe beers.
Ma mgbe ahụ, dị ka ị na-emeghe karama gị nke abụọ, ihe kachasị njọ ga-eme! Ebe nrụọrụ weebụ gị na-akwụsị akwụsị n'okpuru nsogbu nke okporo ụzọ. N'oge a enweghi otutu ihe ị ga - eme belụsọ ma ịnwee nkwado ndabere na ebe (belụsọ ma mepee biya nke abụọ ahụ).
Dị ka Digital Marketing Manager Achọrọ m ịma na mkpọsa m ga-agbanwe. Adịghị m mgbe niile nwere oge (ma ọ bụ na oru ihe ọmụma ma ọ bụrụ na m na-eme ihe n'eziokwu) na-eche echiche banyere ma ebe anyị na-eziga nwere ahịa ga-eguzo na mwubata nke okporo ụzọ.
Ọ bụkwa ebe ahụ CDNify nwere ike inyere gị aka.
CDNify bụ mmalite M na-arụ ọrụ maka CMO, nke James Mulvany hiwere. Zọ kachasị mma iji kọwaa james bụ onye na-echepụta ihe. Ọ bụ ụdị onye na-aghọta etu esi ewere ihe mgbagwoju anya ma mee ka ọ dịrị ha mfe iso ha mekọrịta. Na nke ahụ bụ ihe CDNify na-eme. Ọ na-ewe ihe na-akụda mmụọ mgbe ụfọdụ ime ya ma mee ka ọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ịnwalela itinye n'ọrụ a netwọk nnyefe ọdịnaya (CDN) tupu, ịmara na ọ bụghị ihe kachasị mfe iji nweta isi gị. Approachzọ ịbịaru nso na ụlọ ọrụ ahụ bụ 'otu nha dabara nke ọma', nke bụ ụzọ dị egwu iji hapụ onwe gị n'akpa ma na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ị na-achọghị. Nke a bụ ihe anyị na-achọ ịgbanwe.
CDNify bu ntaneti nnyefe ọdịnaya nke na - eme ka ọ di nfe n’ike inweta CDN na - arụ ọrụ. Ọ dị ngwa ịmalite na nke kachasị mma, ọ na-ewe ọdịnaya gị ma nyefee ya ndị na-ege gị ntị ngwa ngwa - nke pụtara na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ihe ndị gbagwojuru anya ma nwee ike ilekwasị anya n'ịkpọsa mkpọsa dị ịtụnanya kama.
Site na iji CDNify ị nwere ike ịsị ụma maka mkpọsa okporo ụzọ na-akụ saịtị gị na offline. N'ihi na anyị bụ 'federated' CDN anyị nwere ike gbasaa ọdịnaya gị n'ofe igwe ojii anyị, na-ebelata oge ibu ma hụ na saịtị gị nwere ike iguzosi ike n'okporo ụzọ. Nke a na - emekwa ka ọ nwekwuo ọnụ ma ọ pụtara na ị ga - akwụ ụgwọ maka data ị na - eji.
Isi uru ịbụ a kwadoro bụ na anyị nwere ike iri n'etiti netwọọdụ igwe ojii dị iche iche, na-enye anyị ohere iwepụta ọdịnaya gị ọsọ ọsọ dabere na ọnọdụ ndị na-ege gị ntị. Nke a na - enye ha ọsịsọ dị mfe, ahụmịhe na - atọ ụtọ karị ma na - enyere gị aka ị nweta nsonaazụ mkpọsa gị site na ịtụgharị nku anya na clicks
Anyị nwere ugbu a POP 40 n'ụwa niile na anyị na-eto eto a na netwọk mgbe niile. Anyị na-arụkwa ọrụ n'ọtụtụ njikọta iji mee ka mbọ azụmaahịa gị dị mfe n'agbanyeghị usoro ị na-eweta mgbasa ozi a.
Nwere ike ịdebanye aha maka ikpe ikpe n'efu izu abụọ ugbu a na www.cdnify.com na anyị ga-anọ n'aka iji nyere gị aka ịmalite.